Mandry andriran'antsy ny mponina ao Manakara
Publiée par reepicheep — Le 27 juillet 2017
Lehilahy mpanabe iray 41 taona no nisy nidaroka tokony ho tamin'ny 7 ora hariva nony hamonjy ny fodiany.
Tsy fantatra endrika mihitsy ity lehilahy satria tena potika tanteraka mihitsy ny tarehiny nanaovan'ireo jiolahy azy ka mbola miady amin'ny fahafatesana izy amin'izao ao amin'ny hopitaly be an'ny Manakara.
Mbola tao amin'ny renivohitry ny faritra Vatovavy fitovinany ihany no nitranga ity tantara iray ity, mpiandry fonja no notafin'andian-jiolahy tao amin'ny trano fonenany ao amin'ny fokontany Mangarivotra Andrefana.
Naiditra hopitaly avy hatrany ity mpiandry fonja satria dia fira sabatra avy hatrany no nahazo azy ary lasan'ireo jiolahy daholo ny vola sy ny entana sarobidy tao an-tranony.
Fifaninanana baolina fokontany ilay raha, tao amin'ny fokontany A...